Farriintii ay gudbinayeen filimaanta Musalsal-ka ahi oo fool-xumadoodii ka muuqatay Hargaysa.
Markasta oo ay tirada dadku sii badataba waxa hubaal ah in waxyeelladooduna la korodho; markasta oo ay isku soo dhawaadaan ama isa sii dhex galaan dad ku kala geddisan dhaqan ahaan iyo caqiida ahaanba waxaan muran iyo is-maan dhaaf midna ku jirin in ay isu tebiyaan kala qaataan dhaqannada ay kala qaataan ha xumaadeen ama aha samaadeenne. Markaad meelo badan oo kala geddisan ka eegto sooyaalka iyo geeddi socodkii iyo bilawgii nolosha Aadamaha waxaad ogaanaysaa arrimahaas aan kor ku soo sheegnay ee ay ka mid yihiin markasta oo tirade dadkku bataanba in dhibta iyo mashaakilaadkuba la sii badanayaa ka soo bilaw abuurkii nebiyulaahi Aadam; markii Rabbi abuuray nebi Aadan isaga oo ku nool jannada Eebbana ku yidhi “Cun oo cab waxkasta oo halkan ahaaday, marka laga reebo geedkaa” Geedkaas oo ahaa mid Rabbi cilmigiisa ugu diiday. Iblays baa nebiyulaahi Aadan ugu sheekeeyeey in haddii uu geedkaas cuno waarayo mulki boqornimana uu helayo. Markii Aabbaheen Aadan ku dhacay dabinkii iblayskana waakii Alle adduunyada u soo tuuray isaga iyo hooyadeen Xaawa. Iyada oo taasi ay jirto waakii Rabbi Aadan iyo Xaawa kala siiyay ubadkoodii ugu horeeyay ee ay ka mid ahaayeen Haabiil iyo Qaabiil. Waxaynu ku gudo jirnaa arrintii ahayd in markasta oo dadku bataanba ay dhibtu sii kordhayso’e, waa kii Haabiil dilay walaalkii Qaabiil; dilkaas oo noqday dhiiggii ugu horeeyay ee xaq-darro dhulka dushiisa loogu daadiyo.
Waxaan ognahay in markasta oo tirada dadku sii korodhaba ay mushkiladaha iyo dhibaatooyinku sii badnayeen; taas oo ay dadku gacmahooda ku kasbanayeen, markasta oo dadku bataanna dunuunta ayaa sii badanaysay iyada oo ay barbar socdaan ciqaabta Eebbe (S.W).
Aan eegno markasta oo dadka ku kala geddisan dhaqan ahaan iyo diin ahaanba ay isa sii dhexgalaan sida ay isugu tebiyaan una kala qaataan dhaqannada kala duwan ee ay kala wadataan.
Waxaynu ognahay hababkii ay u fidday diinteena suubban ee Islaamku in ay ka midtahay in rag rag iyo dumar muslimiin ahi ay la soo degeen ama yimaaddeen waddanno ay ku noolyihiin dad Asnaam caabuda iyo qaar aan diinba haysan; kadib markii ay dhaqankii iyo la noolaanshiyihii dadkii muslimiinta ahaa ee la soo degay in ay qaar badan oo dadkii waddanka loogu yimid ahaa ay qaateen diintii ay wateen dadkii dhulkooda ugu yimid markii ay arkeen wanaagga la macaamilkooda waddannadaas oo ay kamid yihiin qaar badan oo hadda ugu waaweyn dalalka Islaamka ah sida Malaysiya.
Aan eegno dhanka kale iyo sidii ay u saameeyeen dhaqannadii xumaa ee ay wateen dadkii yimid waddammada Soomaalida iyo kuwii kale ee Muslimiintu ku noolaayeen.
Sidee ayay Soomaalidu ku baratay cabidda sigaarka? Yayse ahaayeen kuwii ugu horeeyey?
Waxay ka sheekeeyaan ama ka sheekeeyeen raggii askarta u ahaa gumaystihii Ingiriiska ee geyigan haysan jiray, marka ay saraakiisha Ingiriis ay cabbaan sigaarka, waxay halka ay fadhiyeen ama joogeen kaga tegi jireen baakidhka ama daasadda uu ugu jiray sigaarku si ay uga daba qaataan ciidanka Soomaalida ah ee ku sugan xeradu si ay u bartaan cabbidda sigaarka si uu u yeesho saylad dhaqaale oo hadhaw maaliyadi ka soo gasho dawladda Biritish-ka.
Sidoo kale markii ay dawladdihii ugu horeeyay ee Soomaalidu samaysmeen, waxa saraakiisha soomaalida loo diri jiray waddanka Ruushka ee Midawgii Soofiyeeti, si ay aqoon korodhsi la xidhiidha shaqadooda ugu soo qaataan dalkaas Ruushka; Raggaas la diray badankoodu waxay soo noqon jireen iyaga oo khamriga caba, marka la weyddiiyana waxay odhon jireen “Meeshaas aannu aadnay, waxay ahayd meel aad u qabaw; sidaa awgeed ana oo diirimaad iyo dhaxan duulin ka eegayna ayaannu isku kululayn jirnay” halka qaarkoodna ay ka soo laaban jireen iyaga oon balwaddaas qariban lahayn.
Aan u soo noqdo abaarya iyo ujeedada odhaahdayda kor ku xusan ee ah Filimaanta Musalsal-ka ah iyo saamaynta ay ku keenneen bulshadeena eegga ee aadka u daawata; waxa marag-ma-doon ah in ay iska caddahay haddaan indhaha laga qarsanayn wax-yeellada aflaamtaasi; kuwaas oo badi ka hadli arrimo la xidhiidha qoyska iyo dhaqan-xumo dhexdiisa ka alloosanta sida: Gabadha la qabo oo nin keeda khiyaamaysa, gabadh laba nin isku wadda, gabadh xaasleh oo nin kale la socota, hantida ninkeedana nin kale ku gunnaynaysa, nin gabadh la qabo gaabsi (Sino) ka doonaya, qof shirqool lagu dilo, mid la sumeeyo iyo in kale oo la fawaaxish iyo fool-xumo-dhagareed ah.
Waxa indhawaaleba laga maqlayay magaalada Hargsya inta kale ee aafada Filimaantana ay ku fidayba waxyaabo aan dhaqan ahaan, diin ahaan, dabeecad ahaan iyo dadnimo ahaan midna u habboonayn.
Waxaan ku soo af-meerayaa odhaahdayda haddii aanay dadka iyo dawladdu iyaga oo ilaalinaya jiritaankooda aanay meel uga soo wada jeedsan waxyaabahan aafada umadeed ah ee ka socda geyigeenna ee xumaantii lala xishoon jiray caadiga ka dhigay in ay inagu iman karto is-waa iyo dhalan rogad ballaadhan oo dhaqan doorsoon ah. Waxay filimaantani wax iska caadiya ka dhigeen is-dhexgalkii dadkii kala caaganaa, waxaanay gooyeen dabar adag oo dhaqnka soomaalidu lahaa sida; soddohda iyo inankii inanteeda qabay ee xilka isku lahaa oo cay iyo af-xumo is-dhaafsanaya, soddoggii iyo soddohdii oo si aad u qariban u wada hadlaya, soddog inantii inankiisu qabay damac guur iyo hunguri ka galayo oo la haasaawaya iyo waxyaabo kale oo xataa damiirkaaga qofnimo diidayo; waxyaabahaas ayaad arkaysaa iyada oo ay aad u daawanayaan, ku xisaabtamayaan una beretamayaan hablo aan qaan-
gaadhin oo da’adoodu aad u yartahay; kuwaas oo marka ay arkaan waxan ay hooyooyinkoodba la daawanayaan in ay yihiin wax iska caadiya; kasii darane waxa loogu turjumay af ay wada fahmi karaan.
Guntii iyo gebagebadii qoraalkaygan waxaan ku soo gunaanadayaa haddii aynu doonayno qaran hufan oo hagaagsan, waa in aynu helnaa qoys habboon oo hanuunsan. Marka qoyska hoos laga dhisaa, qaran hagaagaagye
Haddii meel saruun laga qabsado, waa qalfoof madhane
Dadkuna qaabaddaasoo kaluu, qayb ku leeyahay Qacda hore haddaan ubadka kaca, qayrka lagu leexin
Hadhaw baan la soo qaban karayn, qaladkay gaystaan
Qalinkii Axmed-Yaasiin C. Raxmaan Axmed (Dool)
GAZA:Ciidamada Yuhuuda Oo Dagaal Aan Waxba La Hadhin Ku Qaaday Magaalada Gaza Iyo Maydadka Oo Jidadka YaalaSunday, 20 July 2014 11:28	Djibouti: Ethiopia, Djibouti Preparing Strategic Plan for Economic IntegrationWednesday, 25 June 2014 00:08	MASAR;Hogaamiye Ka Tirsan Ururka Salafiyiinta Ee Dalka Masar Oo Si Ba,an U Weeraray Ururka La Afgambiyay Ee Ikhwan MuslimiintaSaturday, 09 November 2013 05:41	DAAWO: Wariyayaasha Gobolka Saaxil Oo Canbaareeyay Xadhiga Masuuliyiinta iyo Xayiraada Wargeyska Haatuf " Saxaafada Somaliland Kuma Joogsaneyso Xadhig .. +VIDEOThursday, 26 June 2014 19:10	Magaalada Muqdisho Oo Habeenkii Labaad Si Ba,an Loogu Garaacay Madaafiic Iyo Jidka Muhiimka Ah Ee Madaarka Taga Oo Rasaas La,isku Waydaarsaday DHAGAYSO WAXA DHACAYAMonday, 03 February 2014 20:37	BAAQ TAAGEERO AH OO AY DIRAYAAN QURBA JOOGTA KA SOO JEEDA GOBOLADA FAAFAN, SHINIILE IYO ISMAAMULKA DIRIDHABAThursday, 16 October 2014 22:22	DAAWO LAYAABKA: Libaaxa Dunida Sadexaad iyo Heerka Cadhadiisu Gaadho:: DAAWO WACDARAHA KALA QABSADA NIN ODAY AH OO UGU DHACAY XERADA +VIDEOWednesday, 23 October 2013 10:50	DAAWO: Shirweynaha Khaatumo Oo Markale Ka Furmay Taleex iyo Wafuud Ka Tagtey Ceerigaabo iyo Nawaaxigeeda Oo Lagu Soo Dhaweeyay Taleex +VIDEOThursday, 03 April 2014 15:59	BORAMA:Siyaasiyiin Reer Awdal Ah Oo Durbaba U Xusul-duubtay In Ay Isku Soo Taagaan Jagada Musharaxa Madaxweyne Ku Xigeenka Xisbiga Mucaaridka Ah Ee Wadani Iyo Raga Ugu CadcadThursday, 21 November 2013 14:19	DAAWO: 230 Soomaali Laga Soo Tarxiilay Dalka Sucuudiga Oo Maanta Laga Soo Dajiyay Garoon Ka Diyaaradaha Ee Magaalada Muqdisho +VIDEOTuesday, 07 January 2014 20:16	Copyright © 2005 - 2014 Borama News Network by Borama News Network. All rights reserved.